Fantaro ny tokony hatao sy izay tokony hatao amin'ny fanakatonana coronavirus ho avy: Martin Vrijland
Ny ben'ny tanànan'i Amsterdam, Femke Halsema, dia efa lasa omaly maneho ny alalan ' fa tsy hahagaga ny fahatapahan-toerana tanteraka ho an'i Amsterdam. amin'ny Martsa 18 De Telegraaf dia nitatitra fa efa manomana ny fanakatonana feno ny mpitandro ny filaminana. Ny tatitra ao amin'ny Telegraaf an'i alina lasa teo fa miverina ny valanaretina amin'ny gripa dia toa milaza ihany koa izany fa avo roa heny ny olana, satria miaraka amin'ny coronavirus izay toa miparitaka any Brabant ary koa ny areti-mifindra, i Rutte dia hanana alibi hisafidy ny hidina feno.
Inona no dikan'izany amin'ny teny mivaingana? Midika izany fa tsy mahazo mandao ny tranonao ianao, na aiza na aiza misy ny fisavana ary misy ny voasambotra raha toa ka manana fisalasalana na mety fambara fa mety manana otrikaretina ianao na tsy manaraka ny fitsipika (baiko). Nohazavaiko tamin'ny antsipiriany ny dikan'izany eto.
Azafady aparitaka ireo hafatra toy izao ity amin'ny alalan'ny Bloomberg, izay milaza fa ny 99% n'ny olona voan'ny viriosy tany Italia dia efa voan'ny aretina hafa ary ny fampidirana ny fonosana entin'ny fanafody dia voatonona fa mety hiteraka olana ao am-po noho ny fiakaran'ireo sela mena izany, mety hampidi-doza ny fanagadrana anao ianao. Any Afrika Atsimo izy ireo dia efa nampahafantatra an'io lalàna io ary afaka miditra am-ponja mandritra ny 6 volana raha mizara hafatra manohitra ny lahateny ofisialy ianao. Ny zo rehetra dia mazava ho azy esorina amin'ity.
Raha sendra zava-mitranga aminao any Holandy izany dia mety ho voatery hanao fanafody an-tery ihany koa ianao. Ny lalàna dia efa nandalo tany Holandy. Izany lalàna izany dia nanomboka tamin'ny 1 Janoary 2020: ny lalàna mifehy ny GGZ. Raha tsy miara-miasa ianao, dia tsy maintsy miditra ao amin'ny efitra mitokana mandra-pitelinao ny pilina. Tsy maintsy manaiky ny sakamalaho koa amin'ny vatanao ianao, satria voalaza ao amin'ny lalàna.
Ny teny hoe 'total lockdown' dia tsy mihoatra ny 'lalàna martial', izay antsoina koa hoe 'fanjakana vonjy maika ». Avy eo dia voahodidin'ny tafika izahay ary ny polisy sy ny mpampihatra azy. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, dia nampiofanina izy ireo mba tsy hijery ny maha-olombelona, ​​fa hanatanteraka asa fotsiny. "Befehl ist befehl!"
Heverintsika fa tsy dia manana manga be dia be eny an-dalana. Io fanamiana manga io dia efa nosoloina akanjo mitovy amin'ny miaramila niaraka tamin'ny endrika ivelany mahery vaika, bat, tsiranoka mofomamy, kitapo ary mazava ho azy ny basy malaza. Mandra-pahoviana izy ireo no mandray fitaovam-piadiana be loatra ny isan'ny mpanao fampiharana? teo aloha Efa naminavina aho fa mety tafapetraka amin'ny tafika ny tafika ary misy vintana mety fa io koa no antony nahatonga ny tafika amerikana tonga tany Vlissingen tamin'ny herinandro lasa. Mety hanampy any amin'ny firenena EU maromaro izy ireo.
Izay rehetra nolazaiko mialoha hatreto dia tanteraka daholo. Noho izany dia tsy azonao atao intsony ny mitondra ny anarana hoe "paranoid" na mpikirakira tsikombakomba. Ny mifanohitra amin'izany no raharaha. Izay rehetra nihevitra ahy ho mpijery dia izao dia efa any an-trano ary mahatsapa izay nolazaiko mialoha. Azonao atao ny mamaky ny lahatsoratra tao anatin'ny herinandro vitsivitsy.
Afaka nanao ireo faminaniana ireo aho satria hitako amin'ny alàlan'ny script master. Nosoratako io script mavesatra io tao amin'ny bokiko. Ho an'ny rehetra izay namaky io boky io dia ananako fanampiny vitsivitsy voasoratra. Zava-dehibe ny hahatakaranao io sora-sora-kendrena io sy ny famakianao io boky io hatramin'ny fonony ka hatramin'ny fonony. Tao anatin'io boky io, izay navoakako farany tamin'ny taon-dasa dia nanambara mialoha aho fa hisy areti-mifindra hafa koa handefasana ny vaksiny tsy maintsy atao manerantany.
Ao amin'ny lahatsoratra ny 18 martsa Nohazavaiko ihany koa hoe ahoana ny fihanaky ny koronavirus ity dia tapaka fohy amin'ny fitondrana kominista. Tamin'ny 25 Novambra 2019, nofaritako ny fomba nanatanterahana ny kapitalisma sy ny demokrasia bogosy ho fanomanana an'io komunisma io. Ilaina ihany ny manindry an'io rohy io ary mamaky an'io lahatsoratra io.
Raha mieritreritra ianao fa ho lasa tsara ny zava-drehetra ary hiverina ny demokrasia ao anatin'ny herinandro vitsivitsy ary ho tafaverina ny fahafahanao rehetra, tiako ampahatsiahivana anao fa nanana olana momba ny toetr'andro koa izahay. Na izany aza, tsy maintsy nesorinay haingana ny fandroahana CO2 mba tsy ho faty ao anatin'ny 12 taona. Indray mandeha zatra mitondra fiara sy manidina ao anatin'ny fotoana vitsivitsy isika, dia mety hisy ny tatitra mampiseho fa tena nahafinaritra ireo fepetra ireo ho an'ny haavon'ny CO2 azo refesina ary manana alibi farany hitazonana ny fanjakana maika isika .
Ho avy ny korontana ary ny Telegraaf no nanambara tao amin'ny hafatra 18 voalaza etsy ambony (momba ny polisy ho voajanona ho fanakatonana) izay antenaina hamoy ny fahalalany sy ny faharetany amin'ny fotoana iray. Avy eo dia vonona ny hihetsika miaraka amin'ny tanana mafy izy ireo. Ilay 'sandry matanjaka'.
Azo inoana fa mitebiteby ny olona, ​​satria tsy ny rehetra no manana sakafo sy vola hasaina. Midika izany fa tsy maintsy mandoa vola ianao (raha efa mandehandeha lavitra ho an'ny toeram-pivarotana) ary misy mpiasa sy olona miasa irery dia avela tsy mandany vola satria ny fanjakana nampanantenaina dia hitaky herinandro maromaro mandritra ny volana maromaro noho ny birao. .
Tadidinao ve ny korontana farany teo amin'ny biraon'ny hetra? Izany no nilalao Jolay 2019 nefa. Ka raha mandray fepetra isan-karazany tampoka ny fanjakana ary tsy maintsy manangana rafi-pitantanana vaovao iray manontolo mba hanomezana vola vola ny olona, ​​afaka manantena ve ianao fa handeha tsara ity raharaha ity? Tsia, mazava ho azy fa tsy. Izy io dia lasa sarotiny amin'ny fanazaran-tena rehetra. Ary rehefa lany vola ny olona rehefa lany ny sakafo. Azonao atao ny maminavina izay hataon'ny olona noana.
Ny fanontaniana ho an'ny maro manontany amin'ny ho avy dia: “Tena nampidi-doza tokoa ve ilay virosy corona ka very maina an'io rehetra io?"
Ny fanontaniana lehibe indrindra atrehin'ireo: Inona no azoko atao? Ahoana no fomba hiatrehana ireo fepetra hentitra ireo? Ahoana no hataoko raha tsy mitovy hevitra aho?
Ny valiny ihany no azoko valiana amin'ireo. Ny zavatra iray dia mazava: manana adidy fototra ianao hamita ny fahalalahana!
Ny fanjakana kômonista teknolojia vaovao, izay miparitaka eo aminao noho ny "coronavirus lockdown" dia hanandrana hanaisotra ireo zo rehetra ireo raha tsy manao izay tadiavinao ianao. Midika izany fa ho voasambotra ianao raha tsy miara-miasa. Tsy afaka ataoko tsara tarehy noho izy izy. Nandany 7 taona niainako aho mba hampitandremana ny Holandey ary saika very ny zavatra rehetra (noho ny fampielezan-kevitra an-tserasera an-tserasera). Fantatro fa ho avy izany ary nanandrana nampitandrina. Fa misy fanantenana! Misy fanantenana mahery!
Amin'ny tapany manaraka amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava ilay fanantenana aho ary hohazavaiko tsara koa izay azonao atao. Tsy afaka manome izany famaritana izany ho an'izay efa namaky ilay boky aho, satria raha tsy misy an'izany fahalalana fototra izany dia tsy ho azonao ny zavatra soratako. Tokony ho fantatrao aloha ny atao hoe «script script» ary tsy maintsy fantarinao aloha ny fototry ny zava-mitranga. Ka vakio tsara aloha ny boky ary vakio avy eo ny ambin'ity lahatsoratra ity.
Aleo op: Mety ho ny lahatsoratra farany nataoko izany, satria taona vitsy lasa izay no nandao ahy an'i Holandy ary efa any amin'ny firenena iray aho efa mandeha ny fanidiana tanteraka ary mety ho voasambotra amin'ny fotoana rehetra aho. Ka raha tsy mahita lahatsoratra vaovao mipoitra ao amin'ity tranokala ity ianao, dia fantatrao fa izany no zava-misy.
Hanohizana ny famakiana ity lahatsoratra ity dia mety ho lasa mpikambana ianao amin'ny fipihana ny bokotra 'tohananao'. Manome anao hiditra ao amin'ny sisa amin'ity lahatsoratra ity. Ilaina io famarotana io satria tsy maintsy namaky ny boky aloha ianao. Efa mpikambana avy amin'ny € 2 / volana ianao ary manohana ahy hanohy hiady ho an'ny fahalalahanao.
Loharanom-baovao sisa: parool.nl, telegraaf.nl, telegraaf.nl, nomorefakenews.com, nos.nl
Ny mpamaky martinvrijland.nl dia toa manao hetsika mahery vaika mandritra ny hadalàna virus corona
Tags: hameno, dia midika hoe, boky, simenitra, Coronavirus, aretina, Featured, ik, lockdown, Martin, dia tsy maintsy, praktischer, praktische, soso-kevitra, firenena malalaka, Wat
20 Martsa 2020 ao amin'ny 09: 40
Novidiana ilay boky! Miahiahy aho ary manantena fa maro no hanaraka. Amiko manokana aloha dia efa ao anatin'ny fiarovan-tena mahery aho izao rehefa mamaky fa ho avy tampoka tokoa aho ary efa gaga daholo ny firenena hafa. Tao amin'ny tranokala vaovao hafa dia namaky ihany koa ny fanehoan-kevitra momba ny fitsikerana izay holazain'ity mpanjaka anio hariva ity ny fanehoan-kevitra toy izao: "Maninona ny olona no mikomy foana rehefa misy zavatra holazain'ny mpanjaka, avelao ho eo aminao izany" EUH, tsy misy! Ny hevitra mitsikera dia avela!
20 Martsa 2020 ao amin'ny 11: 24
Ny fiantraikan'ny "Mister Smith" dia efa mandaitra amin'izao fotoana izao satria matahotra ny olona ary mino izay rehetra lazain'ny politika, ny media, ny manam-pahaizana sns ... (ao anatin'izany ny olona efa nifoha sy efa nitsikera ny governemanta sy ny MSM atsipy ao anatin'ny toeran'ny torimasiny taloha. Mino izy ireo fa ny 100% MSM indray izao dia namadika ny fitsikerany ny governemanta ho finoana jamba ho an'ny governemanta mitovy.
Midika izany fa mila miadidy ihany ianao fa ny 99% ny olona manodidina anao dia manandrana miady sy hanafika anao amin'ny maha-mpanara-dia azy ho "tompon'andraikitra", raha vantany vao tsapan'izy ireo fa tsy mino ny fitantarana sy amin'ny fiarovan-tena ianao. te handeha.
Efa niaina izany aho raha naneho fisalasalana kely fotsiny momba ny loza ateraky ny tsimokaretina corona. Nanafika mafy am-bava ny olona aho fa tsy maintsy "mihidy" ary tsy maintsy mahatsapa aho fa tena mampidi-doza ny virus corona ary tokony ho menatra ny eritreritro.
Voatafika ihany koa aho tamin'ny Internet raha nanaporofo fa ny fampisehoana ny Minisitra Bruins dia mety ho tsikaritry ny fambara lehibe tao amin'ny "Holllywood" ary mety izy hanaraka ny dian-tongotr'i R. Hauer. Notafihina avy hatrany aho (angamba nataon'ny IM iray) ka voatery hamerina ny teniko aho ary hamantatra hoe iza aho ary aiza no misy azy ary manomana ny tenako hitsidika azy sy ny namany. Betsaka ny hafa koa izay "nanaiky" tsy nanafika ahy fa manohintohina ny fihetsiko rehefa nandalo ny minisitra tena tsara.
20 Martsa 2020 ao amin'ny 12: 28
Ny vola helikoptera araka ny naroso any amin'ny firenena samihafa no fanalahidin'ny rafi-bola dizitaly. Ny olona very vola noho ny tsimok'aretina Corona sy ny vola iray dia ampanantenaina rehefa misafidy izy ireo… .., dia hisafidy ny handray ilay vola eo ambany fepetra, ka ny vola an-tsary amin'ny alàlan'ny làlan'ny lalana sy ny lalana.
Michael32 nanoratra hoe:
20 Martsa 2020 ao amin'ny 12: 29
Mandahatra tanteraka ny fampielezan-kevitra momba ny asan-jiolahy:
Any Alemaina, ny sazy sy ny sazy noho ny tatitra tsy mifanaraka ao anatin'ny rafitra tsy ho ela:
20 Martsa 2020 ao amin'ny 18: 16
Narahin'ny hafatra "vaovao vaovao sandoka" be indrindra tao amin'ny gazety vaovaom-baovao sandoka lehibe indrindra any Holandy, De Telegraaf (dikan-tserasera). Olona iray (voatonona anarana sy menatra azy fa Silamo ny hanamafy ny we-izy ireo mifanohitra amin'izany, ny Silamo ratsy sns) dia nifanintona teo imason'ny polisy ary toa nigadra 10 herinandro an-tranomaizina noho izany. voaheloka.
Izany dia ny fanaovana fampiatoana (fepetra) ny matoatoa amin'ny lalàna tena ho avy izay mahatonga ny kohaka any ampahibemaso dia mety hogadraina (azo ampidirina mandrakizay izany ary ampiharina amin'ny kohaka amin'ny gripa, sns).
20 Martsa 2020 ao amin'ny 18: 42
Eny, namaky aho. Feno fankasitrahana manokana aho handefa ny sonia: “Amin'ny vazivazy kely na fihetsika kely mikomy dia mandeha am-ponja ianao. Zaro tsara. ” Ary eny, ny fanamafisam-bolo ny silamo dia mandeha tsara ihany koa. Rehefa dinihina tokoa, tsy ho ela dia hamely ny pany ny lelafo rehefa hipoaka ny korontana. Mila fikomiana izy ireo ary mila ady an-trano eo amin'ny teratany sy ny faritra Islamika amin'ny vahoaka (aorian'izay dia handamina ny zavatra i Erdogan).
Berna B nanoratra hoe:
20 Martsa 2020 ao amin'ny 20: 56
Hi! . Misaotra anao daholo ireo lahatsoratra nosoratanao ary mampahafantatra anay Martin. Mpikambana vaovao aho ary manana fanontaniana vitsivitsy ho anao. Inona no torohevinao ny Silamo mba hanao an'izany toe-javatra izany? Mieritreritra ve ny fitaovam-piadiana hampiasaina amin'ity ady ity? Fantatrao koa ve hoe mandra-pahoviana isika mety hikatona any Holandy. Amin'ny teny hafa, ao anatin'ny sisintanin'i Eropa? Mety ho olana ihany koa ho an'ireo manana fianakaviana any ivelan'i Eropa ary noho izany dia tsy haiko hoe rahoviana ny fahitako tsy mahita ary ny ahy. Mety hampahatezitra ny olona amin'ny fotoana ihany koa izany. Mieritreritra ve ianao fa mety hitranga amin'ity fahavaratra ity? Sa mihoatra ny 2023? Iza no firenena avela ary tsy olona vaksiny? Heverinao ve fa afaka mihazakazaka amin'ny vaksiny isika? Zavatra manokana. Nilaza ianao fa ao amin'ny firenena mihidy ianao. Efa tsy nahita ve ianao fa ny tenanao taloha sa tsy afaka nandao azy noho ny antony hafa? Tsy misy hevitra hoe aiza no hitoerany. Ny nosy misy olona vitsy sa misy? na firenena ho malefaka? misaotra mialoha 🙂
20 Martsa 2020 ao amin'ny 21: 10
Misaotra anao. Vakio ireo lahatsoratra tao anatin'ny 2 herinandro lasa izay dia hahita valiny amin'ireo fanontanianao ianao. Manoro hevitra ihany koa aho hamaky ilay boky, satria io no fototry ny; koa ho an'ny muslims.
Tsy nandao aho satria tsy nanana ny vola ara-bola, fa koa satria fantatro fa tsy misy ifandraisany na aiza na aiza misy anao. Ity virus satroboninahitra ity dia taratry ny draf'i Lucifera (jereo boky).
20 Martsa 2020 ao amin'ny 21: 38
Aiza no tianao hahatongavana. Amin'ny nosy tsy nisy mponina
Ary diniho tsara ny minitra 1; 58 dia "nahatratran'ny tsiranoka miady amin'ny flu"
anesthes nanoratra hoe:
20 Martsa 2020 ao amin'ny 21: 39
Misaotra. Efa nandidy ny bokinao ve aho? Tsy mbola namaky boky mihitsy aho izao, tsy maintsy ho avy izao
20 Martsa 2020 ao amin'ny 12: 50
Nandritra ny filankevitry ny minisitra dia manao ohatra tsara ny minisitra ankehitriny: milamina tsara izy ireo.
"Mifikitra amin'ny fitsipika fa raha tsy izany dia tsy ho diso ny zavatra hafa"
20 Martsa 2020 ao amin'ny 13: 27
Raha ny marina dia efa ao anatin'ny jadona jadona isika satria TSY misy tena misy
misy ny fanoherana. Malina indray ny rehetra, mahery fo amin'ny kirihitra.
Lazaiko amin'i Martin sy ireo afisy ao amin'ity tranokala ity, ianao no tena mahery fo. Martin foana hatrany dia ny asanao eto ambonin'ity tany ity, omen'ny 'andriamanitra' na iza na iza.
Na dia tsy 'Kristiana' aza aho dia mbola te hanondro izany
Efesiana 6:11 raha fintinina satria miady amin'ny nofo aman-dra isika, fa amin'ireo mpanapaka ny maizina.
Safidy ny tsara sy ny ratsy. Misafidy foana ny tsara ny olona, ​​na dia io lalana io aza no sarotra indrindra.
The Innocence nanoratra hoe:
20 Martsa 2020 ao amin'ny 14: 02
"Azafady, azafady: ity no lahatsoratra farany nataoko."
Na izany aza, manantena aho fa afaka mijanona ao tsy ho afa-maina ny tena virus ianao. Isaky ny mpijery daholo isika rehetra dia mandalo fotoan-tsarotra rehetra izao. Ho aminao anie ny hery.
Karakarao sy misaotra.
20 Martsa 2020 ao amin'ny 20: 41
Martin ny lahatsoratrao sy ny valin-teninao dia mbola hihena ao amin'ireto lafiny ireto. Tsy misy azo atao momba izany intsony, izany no antsoina hoe fampandrosoana. Ny viriosy viruses dia efa vita, tsy sanatria isika fa ahitàna tsy vitan'izay.
Rehefa mamorona piozila ny olona dia lasa lehibe tsy ampoizina ary miakatra ambonin'izay rehetra sy ny olona rehetra, anisan'izany ireo andriamanitr'ity tany ity!
Amin'izany fomba izany no hifandraisantsika amin'ny rain'ny eritreritra voalohany ary mifandray akaiky amin'ilay tena Andriamanitra ivelan'ny tontolony. Tsy afaka tonga eto izy ireo satria kely loatra ny fandehanana matetika eto. Isika irery ihany no afaka maneho ny tena Andriamanitra amin'ny alàlan'ny fahazavana, ny fitiavana sy ny fahamarinana.
Izany no antony hankahalan'ity tontolo ity antsika, fa mandeha amin'ny alahelo isika ary tsy milentika ao anaty rano.
Fantaro hoe iza ianao ary avy aiza.
Orange etsy ambony, ny masoandro etsy ambony. Avy lavitra kokoa izahay, aza avela hiteny ny tenanao!
Henoy tsara, ny fitenintsika ary efa teo foana izy io!
20 Martsa 2020 ao amin'ny 23: 36
Raha ny amin'ireo xanders, ny xandernieuws dia arakaraka ny tena mampanahy ahy. Azoko atao ve ny milaza fa ny tranonkala kristiana dia mety ho tsara kokoa noho ny famafazana fahoriana fotsiny?
Nandefa fanehoan-kevitra tsara aho fa tsy halefa, angamba noho ny hadisoana ara-teknika 😉
Lohateny amin'ny vaovao fasika
Tsy maintsy misafidy isika: izao tontolo izao, isika no prick.
na tapitra dia mijoro noho ny fahantrana isika.
20 Martsa 2020 ao amin'ny 23: 55
Yeah, ho feno tahotra i Xander
21 Martsa 2020 ao amin'ny 11: 19
Tsy azoko an-tsaina hoe tsy ny mpanohitra ny xander dia tsy mpanohitra voafehy (fa mety ho diso) satria tsy azoko an-tsaina hoe misy olona mifoha mba hitsikerana azy (olana lehibe ho an'ny 99% -n'ny mponina izany ary dia mivantana eto amin'izao tontolo izao) ary ny vaovao tsy miankina dia mianjera amin'ity faneriteran'ny sela vaobe manerantany ity.
21 Martsa 2020 ao amin'ny 11: 33
Raha jerena ny fampiroboroboana ny tahotra coronavirus (zon'ny politikan'i Holandy) dia azoko atao ihany ny maminavina fa nanandrana nifindra tany amin'ny tobiko i Xander tamin'ny dingana voalohany mba hisarihana ny làlan'ny mpamaky. Izy izao no mampiseho ny tena endriny.
21 Martsa 2020 ao amin'ny 11: 53
Tsy tokony hahagaga anay izany. Ny ankamaroany izay aparitaka dia avy amin'ny fantatrao. Mampiasa ny mannequins 'illuminati' izy ireo noho ny fampielezankevitra matahotra sao hanome fihetseham-po ratsy ny olon-tsotra. Tian'izy ireo izany amin'ny drafiny. Mahavariana fa tsy misy amin'izy ireo maty tokoa ireo manana 'virus' sy manao fampielezana.
Toa tsy te-hanaisotra izany fihetsika izany ry zareo. Tsy lavo amin'ny fikasan-dratsiny ny olona ary mijanona ho tsara. Rehefa voavaha io dia ny komisiona marobe avy amin'ny olon-tsotra no ho tonga amin'ny varotra sy mandeha toy ny nitranga tany Afrika Atsimo. Azo atao izany raha ny tian'ny olon-tsotra maniry izany.
« Mahatalanjona mahatsiravina ao amin'ny panantonana Coronavirus nosoratan'i Dr. Wolfgang Wodarg?
Rehefa tonga ny fanidiana koronavirus total sy ny endriny: poste fitsapana ary tafika »
Total visits: 1.414.301
Niels Rabius op Coronavirus covid-19 sy siansa: Ahoana ny fomba hidirany ao amin'ny vatanao ary amin'ny fomba ahoana no hamindranao azy?